my kitchen my life: စားကြမယ်ဟေ့ italian ၂
စားကြမယ်ဟေ့ italian ၂
pizza dough filled with ricotta cheese, parma ham, mushrooms, mozzarella and tomatoes.
ကရစိုးနီ လို့ခေါ်ပါတယ်။ အပြန့်လဲရှိတယ်။ ဒီလို ခေါက်ပြီးတော့လုပ်တာက လှတော့လှတယ်။မီး အေးအေးနဲက ဖုတ်မှ ကောင်းတာ။
traditional italian pizza with cherry tomatoes, fersh asparagus, fresh mushrooms and seafood.
ကွာသရို စွန်ဂျွန်းနီ လို့ခေါ်ပါတယ်။ quattro ဆိုတာကတော့ ၄ ပေါ့။
ham, chicken , anchovies, onion, garlic, oregano and mozzarella cheese.
topped with tomato sauce , asparagus, porcini mushrooms and mozzarella.
but guest request rocket leaf instant of aspargaus.that is why we add rocket leaf.
မွန်တနာရား လို့ခေါ်ပါတယ်။ vegetarian ပေါ့။
Posted by leo mark at 6:24 PM
mikozan October 24, 2009 at 8:18 PM
leo October 25, 2009 at 5:22 PM
july April 6, 2010 at 6:23 AM
အားပါး Pizza ဖုတ်စားချင်လို့လာကြည့်လိုက်တာ ကွက်တိပဲ .. super thanks...